Fivarotana fiasana vaovao momba ny kitapo fivalanana
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-04-25
Tamin'ny aprily 25th 2020, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nanangona ny magazay vaovao momba ny kitapo fivalanana. Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2008. Roa ambin'ny folo taona lasa izay, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nanolo-tena ho orinasa iraisam-pirenena, ary ankehitriny dia tena ...
Fampirantiana fitsaboana Alemanina
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-11-15
Amin'ny Nov 15th 2019, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia mandray anjara amin'ny fampirantiana fitsaboana Alemanina. Tao amin'ny fampirantiana, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nampiseho vokatra avo lenta betsaka, toy ny Urine Bag, Heparin Cap ary IV Cannula. Ireo mpamokatra rehetra ireo ...
tamin'ny admin tamin'ny 18-07-17
Araka ny fantatsika rehetra, ny siansa sy ny teknolojia no ho hery mpamokatra voalohany amin'ny taonjato 21. Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia manaraka hatrany ny fivoaran'ny fotoana. Tamin'ny 17 Jolay 2018, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd mividy milina famokarana mandeha ho azy vaovao ho an'ny heparin ca ...
Pads amin'ny alikaola, Alikaola, Iv Catheter, Suction Catheter, Tube fihinanan-jaza, Ny haben'ny lelan'ny fandidiana,